FAQs - Orinasa indostria sy varotra Nc Isa
Top Tank matetika
Top tank hozatra
Top Boxer Tank Top
T-shirt O-neck tsy tapaka
T-shirt V-hatoka mahazatra
T-shirt maina maina
Akanjo Polo mahazatra
Akanjo Polo Raglan
Akanjo akanjo lava
Caps & satroka
Bandana / Sarontava
Vaovao momba ny akanjo
Orinasa mpanamboatra orinasa ve ianao?
Izahay dia orinasa izay mitambatra amin'ny famokarana sy ny varotra, ahitàna ny indostria sy ny orinasa fampidirana varotra.
Ahoana no ataon'ny orinasao amin'ny fifehezana kalitao?
Ny kalitao no laharam-pahamehantsika, hanao ny fanamafisana mialoha ny famokarana toy ny fizahana ny lamba, acceossies ary ny habeny ary ny lamina fanontana sy ny amboradara izahay, santionany ara-batana preproduction nalefa hahazoana fankatoavana. Alohan'ny hamokarana, ny QA dia hanome torolàlana ho an'ny orinasa na atrikasa handinihana ireo hevi-dehibe sasantsasany amin'ity baiko ity. Avy eo izahay dia hanao fanaraha-maso an-tserasera be voninahitra mba hanamarinana ny 1ST ny vokatra famokarana betsaka dia mahafeno fepetra; Ary farany, rehefa vita ny famokarana betsaka, dia hanao ny fanaraha-maso QC anatiny izahay hanao tatitra ara-dalàna momba ny inspeciton ary raha ilaina dia afaka mandefa santionany amin'ny famokarana betsaka ho anao koa izahay ho an'ny fanamafisana farany alohan'ny fandefasana.
Afaka mahazo santionany iray ve aho? Tokony handoa izany ve aho?
Raha manana lamba na santionany mitovy amin'izany izahay, dia afaka mandefa santionany maimaimpoana. Raha manana lamina vaovao hivoarana ianao dia manangona fotsiny ny vidin'ny santionany izahay. Ary ny vola lany amin'ny fandefasana dia eo am-pelatananao. Ny sarany ohatra dia haverina amin'ny famokarana betsaka.
Amin'ny firy ny ora fanaterana?
2-7 andro ho an'ny santionany ary 10-30 andro ho an'ny famokarana betsaka; Ny habetsahana voalamina manomboka amin'ny 1000 pcs ka hatramin'ny 10 000 pcs dia manodidina ny 30 andro. Raha mihoatra ny 10 000 pcs dia mety 45 -60 andro izany.
Azoko atao ve ny manendry ny loko na manana ny sary famantarana ahy ao amin'ilay vokatra?
Tongasoa ny OEM & ODM. Io no teny filamatray: DESIGNAREO, ISA CREATE.
Azonao atao ny mandefa anay ny lamba ara-batana hanahaka anao na azonao lazaina aminay ny loko pantone tsia.
Na azonay atao ny mahazo ny volanao, avy eo dia tadiavo ny loko mikatona ho fanamafisana ho an'ny be indrindra.
Ahoana ny fomba hijerena ny vokatra mandritra ny famokarana?
Manana departemanta QC izahay hanaraka fitaovam-piadiana sy fanaraha-maso vita. Fitaovana fanaraha-maso manokana ao amin'ny laboratoara mba hanaovana fitsapana sasantsasany ilaina toy ny faharetan'ny loko sy ny fihenan'ny lamba; Ny fitsirihana ny antoko faha-3 raha ilaina dia tena tongasoa.
Inona ny fe-potoana fandoavam-bola?
Afaka mandoa amin'ny alàlan'ny TT, Paypal, L / C sns ianao.
Inona ny vokatrao malaza indrindra?
Vao tsy ela akory izay, ny tsipika lava misy t-shirt lehilahy miolaka no be mpitia indrindra; Ny harato maina miaraka amina endrika sublimation dia mafana be koa tato ho ato.
Inona ny MOQ-nao?
Amin'ny ankapobeny, afaka manaiky 100 pcs / style isika. Fa raha QTY afaka mihoatra ny 1000 pcs, ny vidiny dia hifaninana tokoa.
Manana kaonty ve ianao?
Ny factoy ananantsika dia manana BSCI, Disney FAMA, Sedex, Wal-mart, Marvel, Forever Collection Aduit.
Inona ny fe-potoana varotrao?
Afaka manao EXW, FOB, CIF, DDP isika. Ankehitriny any Etazonia, ny vidin'ny DDP dia tena tsara ho anao.
Adiresy:Rm 702, Fizarana 1, Shimao Avenue 168, Honggutan New Dist. Nanchang China 330038
Telefaona: + 86-13870954321